UBen Hausdorff Utshutshisa i-Pentatonix kunye neNew Kirstin Maldonado IiVidiyo zeMculo ngePokhethi yeChamera Ikhamera 4K-NAB Bonisa iindaba ngeBasaza, ukusasazwa kwe-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » iindaba » UBen Hausdorff Utshutshisa iPentatonix kunye neNew Kirstin Maldonado IiVidiyo zoMculo ngePokotho yeChamera Ikhamera 4K
UBen Hausdorff Utshutshisa iPentatonix kunye neNew Kirstin Maldonado IiVidiyo zoMculo ngePokotho yeChamera Ikhamera 4K
Fremont, CA - Julayi 17, 2019 - Blackmagic Design Namhlanje ummemezeli kunye nombonisi wezobugcisa uBen Hausdorff wasebenzisa i-Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K ukudubula amavidiyo omculo kwi-Ariana Grande medley ye-Pentatonix. UHausdorff wasebenzisa i-Pocket Cinema Ikhamera 4K ukudubula i-video ka-Kirstin Maldonado ezayo yekharityhulam yakhe ye-cover ka-Selena ethi 'Ndiza Kuwa Ngothando.'
I-Pentatonix yintathu yeGammy® Igalelo lokuphumelela kunye neqela elithengisayo leqela le-platinum elithengise i-albhamu eyi-million ye-10 emhlabeni jikelele kwaye yenzelwa amakhulu eminyaka yabalandeli xa kuthengiswa imiboniso kwihlabathi.
UHausdorff ungumlawuli kunye ne-videographer osebenze kumavidiyo omculo amaninzi, iividiyo ze-BTS zesiteshi se-YouTube kunye nevidiyo zekhonsathi zombini uPentonx noKirstin Maldonado.
Enye yeemvumi zomculo zakutshanje ezazidubula i-Pentatonix yayiyiqela elicula ingoma yeAriana Grande. Ividiyo yomculo ithathe izilungelelaniso ezingavumelekanga zamalungu amahlanu eqela elihlabelela kunye, kwaye enye yevidiyo ezihamba ngokukhawuleza kwi-YouTube ngoMeyi, i-2019, ukufumana imibono engaphezu kwezigidi ezintlanu ngaphantsi kweenyanga.
"Kwakuyi-shot elula ephepheni, kunye nelungu ngalinye lePentatonix ehleli kwisihlalo esinye. Sasisebenzisa izibane zesa studio ezintathu kwaye ndazama nje ukubamba umzuzu, "kusho uHausdorff. "Nangona kubonakala ngathi ukudubula okulula, umsebenzi omningi kwakufuneka ungene kuwo ukuze ufezekise. I-Pocket Cinema Ikhamera 4K ininike imifanekiso ye-4K engaqhelekanga kunye nexesha elide lokurekhoda. "
Enye yeempawu zekhamera uHausdorff efunyenwe ngokukhethekileyo yiliso eliphezulu emva kwekhamera.
"Kuhlala kulunge xa ​​amalungu ePentatoni angabona umphumo ngamnye athathe, kodwa ngeendlela ezininzi zokujonga iikhamera akunakwenzeka kuba zincinci kwaye azibonisi umfanekiso ophezulu. Kodwa kwi-monitor back box enkulu ye-Pocket Cinema Ikhamera, bonke babenokubona oko bakufunayo ngempuphu nganye kwaye bathanda umgangatho. "
Kwi-cover entsha kaKirstin Maldonado, u-Hausdorff wasebenzisa i-Pocket Cinema Camera 4K enezibane ezinkulu ezenziwe ngaphezu kwevidiyo ye-Pentatonix. Le vidiyo yaqhutyelwa kunye nesimbolo sompu, kunye noHausdorff ehamba rhoqo kwaye ephethe uKirstin ecula phambi kwezinye iingoma ezihlanu.
"Sifuna ukufumana ukubukeka kwe-cinema yangempela kwaye sizive ngevidiyo, kodwa sinokubamba ukufudumala. Ngelo xesha sasizange sibe nebhajethi ukuze siphume kwaye siqeshise iindleko ezininzi. Ikhamera yePokhethi ikhiqiza imifanekiso yomsindo kwi-cinema kwisakhiwo esincinci esinokuba ndikwazi ukuyisebenzisa nje ikhamera kwaye ndibe siselula njengokuba ndifuna ukuba, "watsho.
"Ividiyo ixubene kunye no-Kirstin kunye namashishini akhe amakhulu kunye nabadlali bee-instrumentalists ngasemva. Kungakhathaliseki ukuba luhlobo luni lokutshupha olufunekayo, ndakwazi ukuwufumana ngePocket. Abantu basezindaweni zangasese bajonge i-f4, "kusho uHausdorff. "Ndiyathanda umgangatho kunye ne-RAW, kunye neyakhelwe kwi-LUT ngekhamera. Kwasinceda ngokwenene umdlalo wethu. "
Imveliso yomfanekiso weComputer Cinema Ikhamera 4K kunye nezinye Blackmagic Design iimveliso ziyafumaneka www.blackmagicdesign.com/media/images.
Blackmagic Design Ukudala iimveliso eziphambili zeemveliso zevidiyo, iikhamera zedijithali zedijithali, i-color corresters, i-converters yevidiyo, ukujonga ividiyo, ii-routers, iitshintshi zokuvelisa iifayile, ii-disk rekodi, i-monitor monitors kunye ne-real-time scanners ifilimu yefilimu, ukuveliswa kwemveliso kunye ne-TV. Blackmagic DesignAmakhadi okuthabatha i-DeckLink aqalise i-revolution kumgangatho kunye nokukwazi ukufikelela kwimveliso yokuposa, ngelixa umklomelo we-Emmy ™ wenkampani uzuze i-DaVinci imveliso yokulungiswa kwembala iye yalawula imboni ye-TV kunye nefilimu ukususela kwi-1984. Blackmagic Design iyaqhubeka nokuphulwa kwezinto ezisetyenziswayo kuquka i-6G-SDI kunye ne-12G-SDI iimveliso kunye ne-stereoscopic 3D kwaye Ultra HD usebenza. Eyasungulwa ngabahleli bezithuba ezihamba phambili behlabathi kunye neenjineli, Blackmagic Design ineofisi e-USA, e-UK, eJapan, eSingapore nase-Australia. Ngolunye ulwazi, nceda uye ku www.blackmagicdesign.com.
Phinda ulandule ulwazelelelo olubi ngokuvulekileyo ovela ku "Biza uSawule ongcono" ngeTitorial eNtsha evela kwiRed Giant - Septemba 20, 2019
Bona i-BonaBoundless Yenza i-3D eyiNene yeNqobo yokuNgqineka yeMozulu yeAmazon yeHlathi ene-Blackmagic EGPU Pro - Septemba 20, 2019
Uyilo lweBlackmagic lubhengeza iMini eNtsha ye-ATEM - Septemba 13, 2019
Mamela i-Aurora Health Campaign / i-Colonie Blackmagic Design ikhamera yomklamo omnyama I-Blackmagic Design Pocket Cinema Ikhamera 4K Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli ukuhlela UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli kirstin maldonado iividiyo zomculo pentatonix mveliso SJGolden - SoftAtHome, MStar, iCES2017 Iintetho kunye nemisrya IColonie I-Colonie - Iindaba IKOLONIE / Chicago BuTeknoloji Injini yeVidiyo	2019-07-17
Previous: I-Dejero izisa iiNgcaciso ze-5G-Ready kunye ne-SMPTE ST 2110 Inkxaso kwi-IBC 2019
next: UJeri Palumbo Uxubusha umsebenzi wakhe oMangalisayo, iSports kunye neKamva yokuXuba